Global Voices teny Malagasy » Tao Hong Kong, nosamborin’ireo manampahefana ny mpitantana ny vondrom-panoherana iray tao amin’ny Telegram – noterena izy hanolotra ny lisitra misy ireo mpikambana ao aminy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Jona 2019 12:19 GMT 1	 · Mpanoratra The Stand News Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Shina, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Ny fitànana an-tsoratry ny polisy ny fakàna am-bavany an'i Ivan Ip tao amin'ny paositry ny polisy, izay milaza hoe: “Samborina ianao noho ny vesatra ‘fikononkononana hanakorontana filaminambahoaka’. Taorian'ny fanadihadiana, mino ny polisy fa nanangana vondrona iray ho an'ny daholobe ianao, antsoina hoe ‘Ireo rano iraisampirenena: fanampiana, adihevitra, fitsikilovana momba ny famakiana fanindroany ny 11 Jona’ ary fikononkononana hiditra an-kery ao amin'ny Filankevitra mpanao Lalàna sy fampikatsoana ireo lalambe fototra ny andron'ny 11 sy 12 Jona.” Sary an'ny Stand News, nahazoana alàlana.
Ity tantara ity dia navoaka voalohany tamin'ny  teny Shinoa tao amin'ny Stand News tamin'ny 12 Jona 2019. Nadikan'ny tarika Lingua shinoa ato amin'ny Global Voices ho amin'ny teny anglisy ary naverina navoaka noho ny fifanarahana iray ho fifampizaràna votoaty.
Ireo hetsipanoherana ny fanolorana olomeloka ho any Shina  natoa tao Hong Kong tamin'ny 9 Jona hatramin'ny 12 Jona , dia notsenain'ny entona mandatsa-dranomaso, bala fingotra ary bean bags , saingy tsy teny an'arabe ihany ny famoretana nataon'ny polisy no nitranga — tratry ny fanafihana ihany koa ny media sosialy.
Ny 11 Jona, nosamborin'ireo manampahefana ny mpandrindra ny vondrona Telegram iray antsoina hoe “International Waters” – ireo rano iraisampirenena (公海總谷) ary nohelohiny araka ny vesatra “fikononkononana hanakorontana filaminambahoaka,” hoy ny polisy nanamafy raha niresaka tamin'ny The Stand News.
Ivan Ip, mpianatra iray vao 22 taona, ilay mpandrindra, izay nanaiky ny hiresaka an-telefaona tamin'ny The Stand News. Nolazainy fa fony izy voatazona tany amin'ny paositry ny polisy dia noterena hamaha ny findainy sy hamindra ny lisitr'ireo mpikambana ao anatin'ilay vondrona — izay misy olona 20.000 hatramin'ny 30.000 eo ho eo.
Navotsotra Ing. Ip rehefa avy nampandoavina sazy ny ampitson'izay ary voalahatra ho tsy maintsy miverina manao tatitra amin'ny polisy any amin'ny voalohandohan'ny Septambra.
“Ireo rano iraisampirenena: fanampiana, adihevitra, fitsikilovana momba ny famakiana fanindroany ny 611″ dia iray tamin'ireo vondrona marobe tsara aro fifampiresahan'ireo teratany avy ao Hong Kong mba hikarakarana hetsipanoherana hanoherana ny tolodalàna iray mety hahafahan'ny tanibe Shina misambotra sy mamindra ho any aminy ireo mpanakiana, mpanohitra, ary na ireo mpanao gazety avy ao Hong Kong aza.
Voalahatra ho ny 9 Jona no hatolotra ho ao amin'ny filankevitra mpanao lalàna ilay “volavolan-dalàna (fanitsiana) ny lalàna mifandraika amin'ireo olomeloka any am-pandosirana sy ny fifanampian'ny rantsan'ny fitsaràna heloka bevava,” saingy nahemotra foana ho amina fotoana tsy voafaritra noho ireo famoriambahoaka mitranga.
Tafavoaka ny mombamomba ireo mpikambana ao amin'ilay vondrona
Nambaran'Ing. Ip fa tonga tany an-tranony ny polisy, tokony ho tamin'ny 8 ora alina, ny 8 Jona, nitondra taratasy fanomezandàlana hisava. Avy eo izy nentina nankany aminìny sampandraharahan'ny polisy tao Sheung Shui, ka ireo manampahefana tao no nitaky taminy hanome ny lisitr'ireo mpikambana ao anatin'ilay vondrona. Ambarany fa nanontaniana azy ihany koa ny mombamomba ireo mpanorina ny vondrona sy ireo mpandrindra hafa, hatramin'ny drafitry ny hetsipanoherana.
Nohamafisin'Ing. Ip fa eo ampela-tanan'ny polisy avokoa ny lisitra manontolo misy ireo mpikambana ao amin'ny vondrona, hatramin'ireo hafatra nifanakalozana tany anatin'ireo seha-piresahana voaaro. Taorian'ny fisamborana azy, nanapaka hevitra ireo mpandrindra ny “International Waters” fa hakatona ilay vondrona noho ny resaka fiarovana.
Nolazain'ity mpianatra 22 taona ity tamin'ny The Stand News fa tsy nanatrika ireo hetsipanoherana natao tato ho ato izy, na iray aza, ary tohina tamin'ny nisamboran'ny polisy azy noho ny fizaràna fotsiny ireo vaovao.
Nambaran'Ing. Ip fa ny nataony dia ny namintina sy namerina nandefa ireo vaovao ho an'ilay vondrona, toy ny lisitry ny fitokonan'ny sekoly sy ireo olona nosamborina, ary vaovao fantatry ny daholobe daholo izany rehetra izany, azon'ny tsirairay raisina ety anaty aterineto.
Nahazo dika avy amin'ny fakàna am-bavany nataon'ny polisy an'Ing Ip ny The Stand News. Asehon'io taratasy io fa taorian'ny fanadihadiana nataon'ny Cyber Security and Technology Crime Bureau (CSTCB) – Birao misahana ny fiarovana ny habaky ny aterineto sy ny heloka ampiasàna teknolojia- avy ao Hong Kong, mihevitra ireo manampahefana fa miray tsikombakomba amina vondrona hafa Ing Ip mba hitsofoka handrava ny Filankevitra mpanao lalàna ao Hong Kong sy hibahana ireo làlambe fototra manodidina ny foiben-toeran'ny governemanta, ny andron'ny 11 sy 12 Jona.
Nangatahan'ny The Stand News mba hitondra fanazavana momba ny raharaha ny polisy, saingy mbola tsy namaly ry zareo hatreto .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/06/14/140478/
 dia navoaka voalohany tamin'ny : https://thestandnews.com/politics/逾萬成員交流抗爭資訊-telegram-公海總谷-管理員-涉公眾妨擾被捕/
 Ireo hetsipanoherana ny fanolorana olomeloka ho any Shina: https://globalvoices.org/2019/06/09/hundreds-of-thousands-protest-in-hong-kong-against-the-extradition-bill/
 12 Jona: https://mg.globalvoices.org/2019/06/19/140661/
 bean bags: https://fr.wikipedia.org/wiki/Projectile_en_sachet